Dalkan Kenya oo faa’ido dhan 12 bilyan helaya inta lagu guda jiro Shirweynaha lixaad ee wadamada Afrika iyo Japan – The Voice of Northeastern Kenya
Dalkan Kenya oo faa’ido dhan 12 bilyan helaya inta lagu guda jiro Shirweynaha lixaad ee wadamada Afrika iyo Japan
Dalka Kenyan ayaa helaya lacag gaareysa 12 bilyan oo shillin inta lagu guda jiro shirweynaha lixaad ee ay wadanka Japan iyo dalalka Afrika toddobaadka soo socda uga furmaya magaalada Nairobi.
Shirkan ayaa waxaa ka soo qeyb galaya illaa toban kun oo ergo kuwaasoo lix kun oo ka mid ah ay ka imanayaan dalka Japan halka afarta kun ee kalana ay ka kala imanayaan dalalka ku yaala qaarada Afrika.
Tiradan ayaa waxa ay laban laab ka badan tahay wafuudii ka soo qeyb gashay shirkii caalamiga ahaa ee Qaramada Midoobay ee horumarinta ganacsiga kaas oo bishii la soo dhaafay lagu qabtay magaalada Nairobi.
Kenya Airways,hotelada waa weyn iyo shirkadaha tagaasida kireeya ayaa faa’idada ugu badan heli doona,sida lagu sheegay wargelin ay soo saartay xoghaynta shirka TICAD.
Hotelada waa weyn sida Serena, Nairobi Safari Club, Lilian Towers, intercontinental, Sankara, Hilton, Radisson Blu, Sarova Stanley iyo Sarova Panafric ayaa mar hore la sii carbuuntay.
Magaalada Nairobi ayaa noqonaysa magaaladii ugu horeysay ee qaarada Afrika ka mid ah oo martigelisa shirweynaha Japan iyo qaarada Afrika tan iyo markii uu bilowday 1993, dhammaan shantii shirweyne oo hore loo qabtay ayaa waxaa ay ka dhaceen magaalada Tokyo.
Amina Maxamed oo ah wasiirada arimaha dibada ayaa sheegtay in lacag gaareysa Sh 500 million ay ku bixi doonto u khidmeynta iyo martigelinta wafuuda ka qeyb galaysa shirka kuwaas oo ay ka mid yihiin illaa 35 madaxweyne waxaana la xaqiijiyay in u shirweynaha ka soo qeyb galayo Ra’iisal wasaaraha Japan Shinzo Abe.
Magaalada Nairobi ayaa markale toddobaadka soo socda waxaa la soo dersaya ciriiri wadooyinka ah iyadoo wadooyin badan loo xiri doono sababo ammaanka la xiriira.
Shiweynaha ayaa lagu wadaa in uu ka dhaco Kenyatta International Convention Centre (KICC) inta u dhexeysa August 27 iyo 28th.
Balse shirkado gaaraya illaa boqol oo ah shirkadaha ugu waaweyn dalka Japan ayaa ku soo bandhigi doona wax qabadkooda in kabadan 70 xarun oo isla magaalada Nairobi ka mid ah.
← Is marin waa soo kala dhaxgalay sedex qoyska oo isku haysto meydka haweeney geeriyootay
Madaxweyne kuxigeenka dalka oo balan qadyo u sameeyay shacabka ku dhaqan gobolka xebta →